Deg Deg Daawo Video:Wasiiro Puntland Ah Oo Booqday Halkuu Ku Aasan yahay Daarood ismaacil iyo Doobirad Daarood oo Duleedka Ceerigaabo ah, | khaatumonews
Deg Deg Daawo Video:Wasiiro Puntland Ah Oo Booqday Halkuu Ku Aasan yahay Daarood ismaacil iyo Doobirad Daarood oo Duleedka Ceerigaabo ah,
May 17, 2018 - 3 Aragtiyood
Wasiir ku xigeemka Duulista iyo Hawada puntland ayaa gaadhay deegaanka yubbe oo waxyar uun u jira magaalada ceerigaabo ee gobolka sanaag halkaasi oo ah goobta uu ku aasan yahay daarood ismaacil iyo doobirad daarood.
Hoose Ku Qor Fikradada ( 3)
Siyaasad madhalays ah bay la wareegayaan MJ. Darood goormuu dhintay. Allaah Kariim. Waxay meel walba la taagan yihiin Awr ku kacsi Daaroodow iyo (Sheekh Abaadiroow/Cabdulqaadirow). Adeer film-yadiinii hore ee aad meteli jirteen way gubteen. Dhanka kale Jeegaanta ka tunta Hargeysa. Xamarna qaarbaa ka Hawiyeeya. Laakiin Somali wey ku baarugtay maanta. Qofka Somaliga waxa deeqda Dawlad xalaala oo cadaalad uu ka helayo iyo Somalinimo keliya. Duf ku baxa kuwa wali na doonaya inay Somali kala qoqobaan.
May 17, 2018 at 6:06 pm
Sheekh jiilaani maxaa karabtaan reer iraaq buu ahaa sheekh caalima buu ahaa yaa kuyiri daarood buu ahaa dadka dhintay dhaafa daarood waa dhintay Allaha una xariisto haduu magacooda ku dhibaayo ha aqrin
Faarax Cumar says:
Isaaq kala badhkiisa hooyooyin Daarood uu dhashay baa dhalay, nimanka Isaaq xaasas Daarood ah baa qabaan. Ma Majerteenia cid Daroodnimo wax kaga qaadaysa? Kkkkk sheeko waalan dhe.
Tariikhda beesha Daarood waxa ay ka bilaabmanta Jamhuuriyada Somaliland ee yaa loo Daroodeynaya? Dhulbahante oo Daarood ah oo beel Somaliland ah baa Darawiish uu badnaa, saldanada Warsangeli waa saldanad Somaliland.
Hore iyo dambeeto tariikhda Daarood waa tariikh Somaliland. Gabayadi Guba waxa is dhaafsaday Isaaq, Ogaden, Dhulbahante.
Majerteen 1977 oo Soomaali oo dhan uu dagaalamaysay xoraynta Ogadenia waa kuwi noqday beesha qudha ee xabashida la safta, tooray ayay dhabarka ka geliyeen Soomaali guud ahaan gaar ahaana beesha Ogaden(Daarood).
Majerteen Darood iyo Somalia inu ku shaqesyto inu danahiisa fooshaxun gaadho mooyaane weligi lama sheegin wax uu taray beel kale oo Daarood ah ama Soomaali. Car waa taas ee halkan ku soo qora waxaad tarteen??????
Waa mar Leelkase aad xasuuqdan iyo mar aad Warsangeli aduunka hortiisa ku tidhaahdaan waa beel argagaxiso ah dhulkoodana ka barakicisaan. Maanta dhibka aad dhulka Dhulbahante ku haysaan waa la wada arkaa. Maxa loo waayay beel qudha oo Daarood ah oo wax wanaagsan idin haysta? Soomaalida kale iskaba daa iyagu waa idin ka quusteen mar hore.
Maskax yare, malay xadhig ku dabe, murama naagoodle, wado xun baad maraysaan ee ka soo noqda xumaanta aad dhex dabaalanaysaan iyo qudhunka.
Daarood dambe aad mindi dhabarka ka gelisan ma helaysaan taas waan huba. Soomaalina idin baratay oo idin la yaabsan. Fedeeraal baan rabna iyo Muqdisho Somalia ma aha waxa laga haya afkiina Majerteenow.
Saydiki baa dhamaan Soomali idinka idinku nebcaa. Maanta Soomaali idinka ayay ka necebtahay xabashida. Uuf baa la idin yidhi. Ummada kala fadhiista qabyaaladiina iyo qudhunkiina.
War Deg Deg Ah Dhagayso:Dil Foolxun Oo Ka Dhacay Qardho iyo Garoowe Dhexdooda,
Dil argagax iyo naxdin ku reebay bulshada reer Puntland ayaa ka dhacay inta u ...
War Deg Deg Daawo Video:Amaanka Ceerigaabo Wararkii Ugu Danbeeyay Maamulka SNM Ka Hadlay,
Deg Deg Daawo Video:Caare Qardho Kula Hadlay Warbaahinta”Waxaan U Dulqaadan Waayaay Dulmiga Jeegaanta’
Sidii Shabakada Caalamiga ah Khaatumonews.com Idiin ku soo Gudbisay wararkii Hore Waxaa Bays Maletari ...
War Deg Deg Ah:Gudoomiyaha Barlamaanka Soomaaliya War Culus Ku Dhawaaqay.
Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Mursal Sheikh C/raxmaan ayaa shaaciyay ...
War Deg Deg Ah::C/wali Gaas Soo Saaray wareegto
Madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa wareegto uu xafiiskiisa kasoo saaray ...
© 2018 khaatumonews - All rights reserved.